सक्किगोनीमा किन देखिन छोडे अर्जुन घिमिरे ‘पाडे’ ? - Nepali in Australia
August 27, 2021 autherLeaveaComment on सक्किगोनीमा किन देखिन छोडे अर्जुन घिमिरे ‘पाडे’ ?
‘तै तपाईंहरूको सक्किगोनि पनि भित्रभित्रै त फु’टेको त हैन ? अर्जुन घिमिरे पाँडे नभएको सक्किगोनि पनि सक्किगोनिझैं भएको छ। हामीलाई पाँडे जसरी नि चाहियो।’‘पाँडे खोई चाइयो, नुनबिनाको तरकारीजस्तै भयो सक्किगोनि।’
ता’लिबानले भा’रतीय वायु सेनाको विशेष विमानलाई उड्न दिएन
January 7, 2021 auther